चीनलाई गरीबीको चिन्ता, अमेरिकालाई रंगभेदको कम्युनिष्ट देशमा गरीबी, पुँजीवादी देशमा जातिवाद ! - Nepal News - Latest News from Nepal
चीनलाई गरीबीको चिन्ता, अमेरिकालाई रंगभेदको कम्युनिष्ट देशमा गरीबी, पुँजीवादी देशमा जातिवाद !
५ असार, काठमाडौं । विश्वशक्तिका रुपमा चिनिएको अमेरिका र विश्वशक्तिमा उदाउनै लागेको चीनवीच हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । चिनियाँहरु हरेक क्षेत्रमा अमेरिकाभन्दा तगडा बन्न खोजिरहेका छन् । अमेरिकीहरुचाँहि चीनको बढ्दो प्रभावलाई ढीलो बनाउने कोशिस गरिरहेका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले विहीबार चीनको मुख्य चुनौती गरीबी भएको बताइरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चाँहि अमेरिकामा नश्लवाद एवं जातीय विभेद मौलाइरहेको भन्दै यसले लोकतन्त्रलाई नै तहस-नहस बनाउने चिन्ता व्यक्त गरे ।
चीनको चिन्ता गरीबी
जनवादी गणतन्त्र चीनको दक्षिण पश्चिमी प्रान्त गुइझोउमा सामाजिक आर्थिक विकासका विषयमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति सिले ग्रामीण भेगमा बढ्दो गरीबीलाई अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
राष्ट्रपति जिनपिङले गरीबीबाट जनतालाई राहत दिलाउन कम्युनिष्ट पार्टीले वैज्ञानिक योजना बनाउनुपर्ने बताए । चीनको करिब १ अर्ब ३ करोड जनसंख्यामध्ये ५० देखि ५५ प्रतिशत संख्या गाउँमा बसोबास गर्छन् । त्यसको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि, वन र मत्स्य व्यवसायमा निर्भर छ । उनीहरु परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा भर परेका छन् । वर्षेनी बाढी लगायतका प्रकोपबाट शिकार हुने गरेका छन् ।
शहरमा तीव्रगतिमा आधुनिक विकास भइरहे पनि चीनमा गाउँ र शहरको सन्तुलित विकास हुन सकेको छैन । चीनको करिब ४० प्रतिशत रोजगारी गाउँमा परम्परागत कृषिमै निर्भर छ । गाउँ र हिमाली भेगमा बालबच्चा र बुढाबुढीहरुको बसोबास छ भने युवाहरु रोजगारीका लागि शहर केन्दि्रत हुने क्रम बढ्दो छ ।
करीब ४० प्रतिशत गरीबहरु एवं अल्पसंख्यक जातिहरु विभिन्न ७ वटा स्वायत्त प्रदेशमा बसोबास गर्छन् । विश्वशक्ति बन्ने होडमा लागेको चीनले सन् २०२० सम्म देशलाई एउटा ‘सर्वाङ्गीण राम्रो बन्द समाज’ बनाउने लक्ष राखेको छ । जसअन्तरगत आयदर बढाउने, कलेज भर्नादर बढाउने र एक हजार नागरिक बराबर एकजना डाक्टर पुर्‍याउने लक्ष राखिएको छ ।
पश्चिमाहरुले चिनियाँ समाजमा राजनीतिक स्वतन्त्रता नरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । चिनियाँ समाजमा कुनै दिन बिस्फोट र विद्रोह हुन सक्ने विश्वासमा पश्चिमाहरु छन् । तर, चीनले भने समाजमा हुन सक्ने असन्तुष्टिको समाधानमा ध्यान दिने प्रयास गरिरहेको छ । यसमध्ये गरीबी र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जनआक्रोशलाई मथ्थर पार्नु चिनियाँहरुका लागि जरुरी छ ।
साथै चीनमा सरकार र पार्टीवीचको सम्बन्धमा पनि बेलाबखत समस्या एवं अन्तरविरोध आउने गरेको छ । विहीबार राष्ट्रपति सिले स्थानीय तहमा सरकार र पार्टीवीचको सम्बन्धलाई समेत स्पष्ट बनाइनुपर्ने बताए ।
अमेरिकाको समस्या सामाजिक हिंसा
आफूलाई विश्वकै नमूना लोकतन्त्रको दाबी गर्ने र विश्वभर प्रजातन्त्रको खपत गर्ने अमेरिकामा भने पछिल्ला दिनहरुमा पिछडिएका देशहरुमाजस्तै हिंसा र आतंक फैलने क्रम बढेको छ । विदेशी आतंवादीले नभई आफ्नै देशका नागरिकले कहिले विद्यालयमा त कहिले चर्चमा गोली हानेर हत्या र आतंक मच्चाउन थालेका छन् अमेरिकामा ।
डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गोली चल्नु र लुटपाट हुनु अमेरिकामा सामान्य जस्तै हुन थासिकेको छ । त्यहाँ यसैसाता एक नेपाली महिलाको गोली लागेर मृत्यु भएको छ ।
बुधबार अमेरिकाको दक्षिण क्यारोलिनास्थित एक चर्चमा बन्दुधारीले गरेको आक्रमणमा ९ जनाको मृत्यु भयो । यो घटनालाई प्रहरीले सन्की व्यक्तिको आक्रमण बताए पनि राष्ट्रपति ओबामाले सनफ्रान्सिस्कोमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘आक्रमणकारी जुन उद्देश्यले प्रेरित भए पनि हाम्रो समाजमा एक धब्बाका रुपमा नश्लभेद अझैसम्म मौलाइरहेको यसले सम्झना गराएको छ । यसलाई सबैले मिलेर दूर गर्नुपर्छ ।’
चर्चमा भएको गोली प्रहारमा श्वेत अमेरिकी संलग्न थिए भने आक्रमणमा अमेरिकी नागरिकका साथै अफि्रकी मूलका अश्वेतसमेत परेका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले युवाहरुमा भरिँदै गएको रंगभेदको जहरले लोकतन्त्र नै तहस-नहस हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अश्वेतमाथिको विभेदबाट गुजि्रँदै यहाँसम्म आएको अमेरिकी समाजमा हुने यस्ता सामाजिक अपराधका घटनालाई श्वेत-अश्वेतको नश्लभेदसँग जोड्ने गरिएको छ । यो विषयमा अमेरिकी समाज र मिडिया निकै सम्बेदनशील देखिन्छन् ।
अमेरिका यसैगरी सामाजिक असुरक्षाबाट गुज्रन थाल्यो भने विश्वशक्तिबाट हुने उसको क्षयीकरण आफ्नै घरभित्रबाट सुरु हुने निश्चित छ, जुन कुराको संकेत ओबामाको गम्भीर अभिव्यक्तिले संकेत गरिसकेको छ ।
खुल्ला हतियार अमेरिकाको अर्को समस्या
अमेरिकामा साबुन र तरकारीजस्तै हतियारको खुल्ला बिक्री वितरण हुने गरेको छ । नागरिकहरुले हतियार राख्न पाउने अधिकार अमेरिकी नागरिकलाई छ, जसमाथि अहिले गम्भीररुपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नागरिकलाई हतियार बोक्न दिने अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अमेरिकी संसद सिनेटले अड्काइराखेको छ,जसप्रति राष्ट्रपति ओबामा सन्तुष्ट छैनन् ।
अब चीनले गरीबीमाथिको विजय छिटो प्राप्त गर्ला या अमेरिकाले हिंसा र असुरक्षाबाट पार पाउला ? सम्भवतः यसैले दुबै देशको उन्नति र अवनतिको हिसाब-किताब गर्ने छ ।
#MumbaiRains: 20 Incredibly Inspiring Photos From “Heaviest June Rain Day” In Mumbai
न्यायाधीश गिरीशचन्द्र : ‘जिस के आगे राह नहीं है’ ! ‘बनाए जा बिगारे जा, बिगारे जा बनाए जा’
अमेरिकाको टेक्सास प्रान्तको एक चर्चमा अन्धाधुन्द गोली प्रहार
साउदी अरबका राजकुमारको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु